mairie-antananarivo – Feo manga 2018 andiany faharoa
Feo manga 2018 andiany faharoa
administrateur 7 martsa 2018 Commentaires fermés
Nototosaina androany 07 martsa 2018 tato amin’ny Lapan’ny tanàna ny fifanitsanana famaranana ny Feo Manga Andiany faharoa an’ireo vehivavy nandray anjara mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay natrehan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana. Hetsika tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny andro iraisampirenena ho an’ny vehivavy ihany koa ity hetsika ity.
Marihana fa 12 no nandray anjara tamin’izany ka ny 6 tamin’ireo no tafiakatra nanao ny famaranana ary ny 3 avy amin’ireo indray no nibata ny amboara. Nibata ny amboara voalohany ny avy ao amin’ny departemanta misahina ny fitantanam-bola, nahazo loka Ar 1.000.000 na iray tapitrisa ar ; ny faharoa sy fahatelo kosa avy ao amin’ny Departemanta misahana ny kolotsaina etsy Mahamasina. Ar 500.000 no loka ny faharoa ary ar 300.000 kosa ny fahatelo.
Niarahaba ireo mpandresy ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tamin’ireo ezaka nataon’ny mpandray anjara tsirairay ary nanentana ny hitohizan’ izany feo manga izany ho tsaratsara hatrany amin’ny manaraka. Heninkaja ny kaominina Antananarivo ho izy manana feo manga ary mankasitraka ny mpanotrona sy ny mpitsara ary ny mpitendry ny tenany. Mbola hitohy rahampitso 08 Marsa hatramin’ny 10 martsa ny fankalazan’ny CUA ny hetsika 8 martsa izay hanasana ny olona rehetra ho tonga manolona ny Lapan’ny Tanàna mandritra ireo andro ireo.